Ezi zezona vidiyo zidumileyo kwiYouTube ka-2017 | Iindaba zeGajethi
I-YouTube iye yamela ngakumbi ngeli xesha millennialNgokukodwa ngenxa yokuba iye yaba ngumabonakude wabo bathiya intiyo kamabonakude, iqela labantu abancinci abakhetha ukusebenzisa into abayifunayo nangexesha abalifunayo. Nangona u-2017 ikwangunyaka obalulekileyo ngenxa yemithetho emitsha yokwenza imali, I-YouTube iseliqonga elithandwayo kwizigidi zabasebenzisi.
Njengonyaka wonke, iYouTube ithatha isigqibo sokuphendula ngezona vidiyo zaziwayo zonyaka, ezingazukubonwa njengezona zibalaseleyo, kodwa njengeyona intsholongwane. Ke masibone ukuba zeziphi iividiyo ezaziwa kakhulu kwi-YouTube ngexesha lika-2017 eSpain nakwilizwe liphela.
Imask Mask Singer 2, Ngexesha lomboniso weetalente waseAsia, ubelilungu lokuqala ngezizathu ezicace gca, kungekho ngaphantsi kwe-182 yezigidi zokujonga, inkokheli yeenkokheli. Ilandelwa ngokusondeleyo, kwindawo yesibini, yividiyo ye- UKyle Hanagami Choreography, ividiyo apho ingoma kaEd Seheran yangqungqa ngokugqibeleleyo, kungekho ngaphantsi kwe-119 lezigidi zokundwendwela kwaye i-WMG ayikuvumeli ukungena kumaphepha ewebhu.
Okwesithathu kwiqonga I-Ping Pong Trick Shots 3, kungekho ngaphantsi kwezigidi ezingama-93 zokundwendwela le wizard yeebhola zeping-pong. Ukucutha kancinci.
Zonke ezinye izithuba zezi:
UDarci Lynne - 41 yezigidi: LINK
I-Ed Sheeran Carpool Karaoke -izigidi ezingama-39: LINK
ILady Gaga NFL-37 yezigidi: LINK
Usuku lokuvulwa - Izigidi ezingama-35: LINK
Ezona zijongwa kakhulu kuYouTube Spain
Iqonga laseSpain lithathwa ngokungabikho ngaphantsi kwezikhundla ezimbini zokuqala DespacitoIngoma yasentsomini ethi, njengoko kungekho zinguqulelo zigqibeleleyo zisuswe eLos Morancos. Ngelixa indawo yesithathu iye kweyona ndawo imele abathethi abathetha iSpanish emhlabeni, RubiusOMG, Ngevidiyo yakho Isipho Esiqalekisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezi zezona vidiyo zidumileyo kwi-YouTube ye-2017
Indawo yokufundwa kweminwe ye-Samsung Galaxy S9 iqinisekisiwe